प्रचण्डका घरभेटीको ठे’क्का रोकियो, साढे ५ करोड ध’रौटी ज’फत…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरभेटी शारदा अधिकारीको शैलुङ इन्टर’प्राइजे का’र्वाहीमा परेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको आ’डमा ठे’क्का पार्ने तर काम नगरी मुलुकको ह’रिबिजोग बनाउने काम जारी रहेपछि म’ल प्रक’रणमा प्रचण्डका घरभेटी
अधिकारीको कम्पनी दो’स्रो पटक का’र्वाहीमा परेको हो ।
प्रचण्डकै आ’डमा रहेर किसानलाई स’मस्यामा पार्ने काम गरी भारतबाट रा’सायनिक मल ल्याउने ठे’क्का पाएको अधिकारीको सैलुङ इन्टर’प्राइजेजलाई कृषि सा’माग्री कम्पनी लिमिटेडले दो’स्रो पटक का’रबाही गरेको छ । ३० हजार मे’ट्रिक टन यु’रिया म’ल ल्याउन ठे’क्का लिएको सैलुङ
इन्टरप्राइ’जेजले तो’किएको समयमा ल्याउन नसकेपछि ठे’क्का स’म्झौता र’द्ध गरेर ध’रौटीबापतको पाँच करोड ५६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ ज’फत गरेको हो ।कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीका अनुसार सैलुङलाई का’लोसू’चीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
गहुँ र तोरीको लागि चाहिने ३० हजार मेट्रि’क टन यु’रिया मल कात्तिक २४ गतेभित्र ल्याउनुपर्ने भए पनि नसकेपछि ठे’क्का सम्झौ’ता र’द्ध गरेर ध’रौटी ज’फत गरिएको प्रबन्ध सञ्चा’लक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
असार र साउन महिनामा धानमा हाल्ने म’ल ल्याउन न’सकेर सैलुङले यसअघि पनि का’रबाही भो’गिसकेको छ । कात्तिक २४ गतेसम्म मल ल्याउनेगरी गत असार १८ गते सैलुङसँग कृ’षि सा’मग्री कम्पनीले सम्झौ’ता गरेको थियो । तर दो’स्रो पटक पनि तो’किएको समयमा म’ल नल्याएप्छि कार्वाही गरिएको हो ।
सरकारलाई यु’रिया म’ल आपूर्ति गरिदिने ठे’क्का लिएका कम्पनीले सो मल तो’किएको समयमा आ’पूर्ति नगर्दा मलको अ’भाव भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय अन्त’र्गत रहेको कृषि सा’मग्री कम्पनी लिमिटेडबाट यु’रिया मल आ’पूर्ति गर्ने ठे’क्का लिएका सैलुङ इन्टरप्राइजेज र हो’निको म’ल्टिपल कम्पनीले हालसम्म मल आ’पूर्ति गर्न नसकेका हुन ।
पुस–माघमा ठे’क्का हात पारेका ती दुई कम्पनीले भदौ २० गतेसम्म सम्पूर्ण मल आ’पूर्ति गरिसक्नुपर्ने थियो तर हालसम्म आ’पूर्ति गर्न नसकेको कृषि साम’ग्री कम्पनीले जनाएको छ ।
ती दुई कम्पनीले २५–२५ हजार मे’ट्रिक टन यु’रिया म’ल आ’पूर्ति गर्ने ठे,क्का लिएका थिए ।
यो सिजनमा कम्तीमा ५० हजार मेट्रिक टन यु’रिया मल आवश्यक पर्छ र त्यति नै मात्रामा ती कम्पनीले समयमा आ’पूर्ति नगर्दा किसानले स’मस्या भो’ग्नुपरेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो ।कृ’षि सा’मग्री के’न्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीका अनुसार भदौ २० गतेसम्म मल आ’पूर्ति गर्ने सम्झौ’ता थियो तर हालसम्म आ’पूर्ति हुने अवस्था छैन ।
साल्ट टे’डिङ कर्पोरे’सनले भने पाएको कोटा अनुसार आफ्नो म’ल ल्याउन सफल भएको छ । आफ्नो को’टाको साढे २२ हजार टन यु’रिया टे’न्डर गरेर जेठ पहिलो साता नै भारतको कोल’काता ब’न्दरगाहसम्म ल्याइसकेको थियो । को’रोना महामा’रीले लगाइएको ब’न्दाब’न्दीका कारण केही समय उतै रो’कियो तर अहिले साल्ट ट्र’डिङले बिस्तारै त्यो म’ल आयात गरिरहेको छ ।
वीरगञ्ज र विराटनगर नाका’बाट तीन हजार मे’ट्रिक टन म’ल आइसकेको छ भने अरू आउने क्रममा रहेको साल्टले जनाएको छ । यसरी एउटा कम्पनीले ल्याउँदा अर्को कम्पनीले ल्याउन नसक्दा प्रश्न उठेको जनाइएको छ । कृषि सा’मग्री कम्पनीले गत पुस र माघमा ५० हजार मेट्रि’क टन यु’रिया ल्याउन बो’लपत्र आ’ह्वान गरेको थियो ।
सो बो’लपत्र शारदाप्रसाद अधिकारीको सैलुङ इन्ट’रप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको हो’नीको म’ल्टिपल कम्पनीले सस्तोमा क’बोल गरेका थिए ।
यी दुई कम्पनीले सस्तोमा बो’लपत्र क’बोल गरेकै कारण यो ल’फडा भएको कृ’षि सा’मग्री के’न्द्रका सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् । सस्तो द’रमा बो’लपत्र क’बोल गरिहाले तर त्यसमा घा’टा हुने देखिएपछि सुरुदेखि नै ती कम्पनीले म’ल ल्याउन आ’नाकानी गरेको जनाइएको छ । -जनता टाइम्स्
Prev३ हजार बाईकसहित २० हजारको सहभागितामा भोलि पोखरामा राजावादीहरुले र्याली निकाल्ने…हेर्नुहोस् ।
Nextजिरे खुर्सानीको ‘जिरे’ यति ठुलो भए, काम नपाउँदा रोए ! सानै भएको भए फिल्म सिरियल खेलाउथे होला भन्दै पोखे दुखेसो…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)